Sida lacag looga sameeyo Clubhouse - Muraayad
Home Nolosha Sida lacag looga sameeyo Clubhouse
Sida lacag looga sameeyo Clubhouse
Lix qaab ayaad lacag uga sameyn kartaa Clubhouse.
Qaabka aad lacag uga heli karto Clubhose | Image Credit: Getty/Unsplash
Waxay u badan tahay inaad maqashay app-ka cusub ee Clubhouse.
Waa app la aasaasay bishii April ee 2020-kii, waxaana isticmaali kara qof lagu casuumay oo kaliya. Taas micnaheedu waa in aadan soo dagsan karin Clubhouse haddii uusan qof horay usii isticmaalayay kugu soo dhaweynin.
Sida aan ka war qabnona, Clubhouse waxaa sida haboon u isticmaali kara oo kaliya dadka haysta telefoonnada Iphone.
Haddaba mowduuceennu ma aha kaas, balse waa sida aad lacag uga sameyn kartid Clubhouse.
Haddii aad isweydiineysay in dhaqaale laga helo, jawaabtu waa haa!
Sidaas darteed, waxaa jira lix tallaabo oo haddii aad qaaddo aad ku biireyso dadka lacagta ay kasoo gasho Clubhose.
1- Ugu horreyn kusoo biir
Tan iyo markii la aasaasay Clubhose waxaa aad usoo badanayay dadka isticmaala oo maalinba maalinta ka dambeysa sii badanayay.
Sida caadiga ah, app kasta oo ay dad badan adeegsadaan waxaa khasab ah inuu yeesho qeyb xayeysiimo ah oo lacag laga sameyn karo.
Inkastoo hadda ay Clubhose sida habboon u isticmaali karaan dadka heysta Iphone-ka iyo qalabka kale ee shirkadda Apple, haddana waxaa jira hadal-heyn ku saabsan in dhawaan lagu soo kordhin doono qeybta Android-ka.
Way jiraan dad kazoo gala Android laakiin waxy zoo maraan wad do qarda jeez ah, mana heli karaan adeegyada app-ka oo dhammeystiran.
2- Xogtaada oo dhammeystiran geli
Inaad lacag ka sameyso Clubhose waxaa kuu sahli karta in marka hore aad dhisto xogtaada shakhsiyeed ee lagugu garan karo, si ay dad badan kuusoo raacaan.
Dad badan ayaa Clubhouse kusoo bandhiga xayeysiimo ku saabsan wax soo saarkooda, haddii ay dadka kugu taxan badan yihiinna waa hubaal in aad qeyb ka noqon karto xayeysiimahaas.
Balse inta andan codsanin ka hor waa in aad noqoto qof xogtiisa dhabta ah ay meesha ugu qoran tahay.
3- Dhaqdhaqaaqa badi qolalkana gal
Si aad u hesho taageerayaal badan oo kugu taxan waa inaad xoojiso diiradda aad saareyso Clubhouse, sababtoo ah app-kan waa mid aad loo xiiseeyo oo dadku ay wada jecel yihiin.
Sida ugu haboon waa inaad gasho qolalka la isugu yimaado, gaar ahaan kuwa Soomaalida. Waliba bartilmaameedkaagu ha ahaado qolalka ujeeddadoodu ay tahay in follow la isasiiyo.
Isla marka aad ku biirto qol, guji qeybta gacan taagga, markaasna waxaa la wargelinayaa maamuleyaasha qolka si ay kuu soo dhaweeyaan oo aad fursad ugu heshid inaad hadashid.
Mar walba oo aad qol gasho, noocuu doonaba ha ahaadee, waxaa badanaya dadka ku arkaya ee laga yaabo inay kugu taxmaan.
4- Fur qolal
Qaar badan oo ka mid ah dadka isticmaala Clubhose waxay ka labalabeeyaan inay abuuraan qolal ay iyagu leeyihiin.
Sababta ay uga baqaan waxaa ugu weyn in aysan heli karin dad ku filan oo soo buux dhaafiyay qolka. Laakiin waxaad ogaataa in marka ay dadku yar yihiin ay leedahay faa’iido ka badan marka kale, maadaama la isla wada hadli karo wax qashqashaad ama saxmad ahna aysan jirin.
Isbarashadaas waxay horseedeysaa in qof walba uu yeesho macaamiil, marka aad billaabeyso sameynta lacagtana waxaa ku anfacaya tirada dadka aad heysato.
5- Sameyso Club
Club-yadu waa qolal dano gaar ah loo sameeyo. Adeeggaas wuxuu hadda u furan yahay oo kaliya dadka sida joogtada ah u isticmaala Clubhouse, waqtiga ugu badanna ku bixiya.
Balse haddii aadan ka mid ahayn dadkaas, raac tallaabooyinka aan kor kusoo xusnay.
Si aad u furto Club, hoos u dag oo guji meesha ay ku taallo astaanta ku dar ee qeybta ay ku qoran tahay xogtaada. Kasii xulo “allow members” si ay dadka ugu soo biiraan.
Halkaas waxaad kusoo bandhigi kartaa mowduucyo gaar kuu ah, taasina waxay kuu sahmeysaa inaad ka mid noqoto dadka loo oggol yahay inay lacag ka sameeyaan Clubhouse.
6- Xiriir fiican samee
Marka aad kusoo biirto isticmaalka Clubhouse, dhis xiriir wanaagsan oo kaala dhaxeeya dadka kugu taxan. Qodobkan waa mid ay si fiican u fahmayaan dadka ganacsiyada abuura.
Mar walba sida uu la dhaqankaaga dadka kale u wanaagsan yahay ayay ku xiran tahay in macaamiil fiican aad yeelato.
Sidee lacag ku sameyn kartaa?
Marka aad fahanto isticmaalka Clubhouse, macaamiilna ku yeelato waxaad lacag ku sameyn kartaa lix qaab oo hoos ku xusan.
Iibin toos ah: Haddii aad heyso badeecooyin aad ka ganacsato, si toos ah ugu iibi Clubhouse dhexdiisa, maadaama uu yahay meel ay dad badan isugu imaadaan. Qolal gaar ah samee, dadkana u sheeg in ujeeddadu ay tahay iibinta badeecooyin, sidaasna ku rajee in la iibsado.
Weydiin iyo war celin: Bixi adeeg su’aalo iyo jawaabo ah. Dadka soo gala qolalkaaga u fasax in ay ku weydiiyaan su’aal kasta, adiguna aad ka jawaabto. Dabcan waxaad u baahan tahay in aad lahaato aqoon kugu filan oo aad adeeggaas ku fulin karto. Sida lacag looga sameyn karo habkan waa labo qaab. Tan koowaad oo ah in aad qolka ka dhigto mid qofka soo galaya uu lacag kusoo galo iyo tan labaad oo ah in qof kasta oo su’aashiisa laga jawaabayo uu bixiyo lacag.
Xirfado iyo tababar: Lacag ku kasbo adigoo barnaamijyo u sameynaya dadka kugu taxan ama aad qolal uga sameysay Clubhouse. Tababarrada aad bixin karto waxaa ka mid ah qaababka haboon ee jimicsiga, xeeladaha is caateynta, iyo nooc walba oo aqoon ah. Lacag cayiman u sheeg qof walba oo adeeggaas loo fulinayo.
Qolal la maalgaliyo: Haddii aad heysato dad badan oo kugu taxan, tusaale ahaan marka aad leedahay qol ay si joogto ah usoo galaan dad boqollaal qof ama kumannaan qof ah, waxaad heli kartaa shirkado ganacsi ama shakhsiyaad maalgaliya qolkaaga iyagana loogu sameeyo xayeysiimo.
Xayeysiimo toos ah: Maadaama uu Clubhouse yahay mid ka mid ah baraha bulshada ee dadku isugu yimaadaan, waliba toos loogu wada hadlo la isuna maqlo, waxaad xayeysiimo ugu sameyn kartaa sida ay u sameeyaan idaacadaha caadiga ah.
Martigalin lacag ah: Qolkaaga macaamiisha badan leh ee ay dadka tirada badan ku taxan yihiin waxaad ku qaban kartaa barnaamijyo iyo shirar aad lacag uga qaaddo dadka kireysanaya.
Previous article4 arrimood oo aad ku xoojin karto caafimaadka maskaxdaada
Next article7 arrimood oo aan hilmaamno inaan uga mahad celinno hooyo